Anjilava Sambava Pitik’afo no nampirehitra ilay fasana
Fasana iray no nirehitra nipitihin’ny afo ny 02 desambra lasa teo teny Ambodiravina, Anjialava Sambava. Pitik’afo avy tamina fandoroana tanimbolin’olona no nahatonga ny afo raha araka ny vaovao voaray.
Naharitra ora efatra ny afo nanomboka tamin’ny 11 ora atoandro ka hatramin’ny 03 ora folakandro. Mponina tany an-toerana miisa 300 no nifanome tanana namono ny afo. Zavatra hafa indray anefa no nitranga taorian’izany. Rehefa voafehy mantsy ny afo dia niaraka nikorana ireo mponina ka noho ny hamamoana dia raikitra ny ady izay nihafara tamin’ny fifamelezana totohondry. Voatery niditra an-tsehatra mihitsy ny Fokontany nandamina ny raharaha. Lehilahy manodidina ny 20 isa moa no indray nifamono nandritra izany.
Legende : Ity ilay fasana nirehitra
Midangana ny vidin-tsavony Velon-taraina ny mpanasa lamba
Tsy mitsaha-midangana ny vidin-tsavony eny an-tsena efa ho volana vitsivitsy izao. Savony novidiana 600 Ar telo volana lasa izay lasa vidiana 1300 Ar ankehitriny.
Mpifindra monina avy any Atsimo An’aliny no efa any tonga any Boeny
Efa tafakatra an’aliny ny isan’ireo mpifindra monina avy any Atsimo mamonjy ny Faritra Boeny amin’izao. Miisa 80 kosa ireo tonga eto Antananarivo afak’omaly ary mikasa ny hanohy ny diany any Mahajanga.
Fanaraha-maso ny vidin’ny Vitogaz Nanao fidinana tampoka ny Minisiteran’ny varotra
Niara-nidina tampoka teny anivon'ny mpaninjara mivarotra entona fandrehitra Vitogaz ny delegasiona avy eto amin'ny Minisiteran'ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana (MICC)